Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise isitayela sokumiswa esisha se-posture corrector-smart posture. Izithombe zesethenjwa sakho njenge,
QAPHELA: Ukuqapha isimo sangempela esinembile. Uma umhlane wakho ugobe ngaphezu kwama-25 degrees, uzolungisa ukuma kwakho ngesexwayiso sokudlidliza ukuze uhlale uqotho.
DESIGN ye-INGENIOUS :: design eyi-8 ebunjiwe yi-ergonomic. Ivumelana nejika lomuntu uma ligqokwa. Izinto zerabha ezisezingeni eliphakeme ziyaguquguquka kakhulu, zikwenza uzizwe ukhululekile, futhi ngeke uzizwe ingcindezi yokungakhululeki emahlombe akho lapho uyigqoka.
ISAYENSI YESAYENSI: Yisebenzise amahora ama-2 ngosuku amaviki ama-3, futhi ungazizwa izinguquko ezisobala. Imisipha yangemuva isetshenziswa ukwakha inkumbulo yemisipha nokuguqula imikhuba emibi.
UKUQEQESHA: Ukushaja ihora eli-1 nokusetshenziswa kwezinsuku eziyi-15. Ibhethri le-500mA elikhulu-umthamo lingasetshenziswa isikhathi eside. Kungalungiswa ngokuqhubekayo ukuma kwakho impilo ende futhi akudingi ukulungiswa okwengeziwe.
1. Gqoka isikhumba esingabonakali, ukhululekile futhi uphefumule;
2. Ukuqapha ukuma kwe-Omnidirectional, inkumbulo yemisipha yokuzivocavoca;
3. Ukushintsha emuva kungeneka kalula, futhi bobabili abadala nezingane bangayisebenzisa kalula.
Isikhathi: sebenza, funda, uhambe inja, uhambe, ukuzilibazisa, njll.
1. Lungisa amahhanisi ubude bawo obufanele;
2. Ngemuva kokugqoka, beka umhlane, uphakamise isifuba, bese ubamba ukushintshana kwesekhondi e-1 ukuze unikeze amandla esikhumbuzo, isikhumbuzi sizamazama amahlandla ama-3;
3.Gcina ukuma okulungile kuze kube yilapho i-application inyikinyeka kathathu;
4.Ngesikhathi esifanayo, isikhumbuzi siqophe ukuma kwakho okulungile;
5.Uma une-hunchback Radian of degrees ezingaphezu kuka-25, isikhumbuzi sokuma sizoyazisa ngokuzenzakalelayo bese sikhipha ukudlidliza ukukhumbuza;
Isikhumbuzo sokuma sikukhumbuza ukuthi ugcine isifuba sakho siqonde futhi ubheke phezulu ngokudlidliza.
Ubukhulu: eyodwa ilungele konke, Material: ABS + ibhande eliphakeme le-nylon eliphakeme.
Isisindo: 85g, Umsebenzi: ukulungiswa komgogodla, ukuphuculwa kwemisipha, ukuvikela umbono, Umthamo webhethri: 500mAH / 3.7v, Ishaja esibonakalayo:
ejwayelekile i-V8 USB interface, abantu abafaka isicelo: izingane / abantu abadala kufaneleka konke, ukuhanjiswa kwamandla: 5v, ukusetshenziswa kwamandla: 0.4w, isikhathi sokushaja: cishe amahora angama-2, ukushaja ugesi: 5v